रुखको जरा उखेल्ने काममा अवरोध पुग्दा रोकियो सिँचाइ आयोजना - pnpkhabar.com
casino real money: In The Event You Rent Or Own?
BlackCupid Review June 2019
The Life associated withaProject – Essay Example
You are at:Home»समाचार»रुखको जरा उखेल्ने काममा अवरोध पुग्दा रोकियो सिँचाइ आयोजना
रुखको जरा उखेल्ने काममा अवरोध पुग्दा रोकियो सिँचाइ आयोजना
By रिता घिसिंग on २८ भाद्र २०७५, बिहीबार १०:२६ समाचार
चिसापानी, कैलाली, २८ भदौ : रुखको जरा उखेल्ने काममा अवरोध पुग्दा राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती भएको सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । कैलालीको रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत लम्की शाखा नहरको निर्माण कार्यले यस्तै नियती भोग्नुपरेको छ ।
निर्माण कम्पनीले तामझामका साथ आफूले पाएको नहर निर्माण गर्न तदारुपता देखाए पनि सम्बन्धित सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण शाखा नहर निर्माण सकिने समयमा बल्ल शुरु हँुदैछ । चौध दशमलव सात किलोमिटर लम्बाइ भएको लम्की शाखा नहर निर्माण गर्न २०७३ साउन २३ गते रु एक अर्ब ७१ करोड ७९ लाख १५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
नहरअन्तर्गत पर्ने ६ किलोमिटर वन क्षेत्रमा रुख कटानका लागि ठेक्का सम्झौता भएको करीब दुई वर्षपछि जिल्ला वन कार्यालयले कटानको आदेश दिएको थियो । “हामीले गत असारमा रुख कटान सकेर नहर निर्माणको कामलाई थप गति दिन खोज्दा वनले रुखको जरा उखेल्ने प्रक्रियामै ढिला ग¥यो,” नहर निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका–कुमार जेभीका कार्यक्रम प्रबन्धक सुनिल पौडेलले रासससित भन्नुभयो, “विविध प्रक्रिया ढिलाइका कारण काम गर्ने वातावरण मिलेन ।”
छ किलोमिटर वन क्षेत्र पर्ने नहर निर्माणस्थलमा करीब दुई हजार ६६८ रुख काटिएका थिए । सिँचाइ आयोजनाले वन विभागको सहमतिमा निर्माण कम्पनीलाई गत वर्ष चैतमा रुख कटानको आदेश दिएको थियो । निर्माण कम्पनीले गत असारमा रुख घाटगद्दी गरेको थियो । दुई दिनअघि मात्रै नहर निर्माण हुने स्थलको रुखका जरा उखेल्न अनुमति पाइएको र सोहीबमोजिम काम थालिएको पौडेलले बताउनुभयो । “यस बीचमा खोल्सा र खाली भएको ठाउँमा नहर निर्माणदेखि अन्य संरचना बनाउने काम गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “वन कार्यालयका कारण नहर निर्माणले गति लिन सकेन ।”
रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका इञ्जिनीयर कृष्णबहादुर विष्टले वन कार्यालयको रुख कटानलगायतका प्रक्रियाका कारण लम्की शाखा नहर निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । “निर्माण कम्पनीले करीब २५ प्रतिशत काम गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शुरुवातको ६ किलोमिटरमा रुख कटान र बाँकी क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।” छ किलोमिटरदेखि १४.७ किलोमिटरसम्म पुग्दा करीब २१८ परिवारलाई जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ । मुआब्जाको कामले अझै प्राथमिकतता पाउन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीलाई समय थप गर्ने प्रक्रिया थालिए पनि मुआब्जाको विषयले अझै निर्माणमा समस्या आउने देखिएको छ ।
“कटासेदेखि ६ किलोमिटरसम्म रुख कटान भएर जरा उखेल्ने काम थालिएको छ,” इञ्जिनीयर विष्टले भन्नुभयो, “आयोजनाअन्तर्गत अन्य निर्माणका कामसमेत हुँदैछन् ।” लम्की शाखा नहर नहरअन्तर्गत गर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण र ऐलानी जग्गा भएकालाई पनि सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । इलाका वन कार्यालयका अधिकृत रविकुमार निधि कर्णले प्रक्रियामा व्यवधान हुँदा नहर निर्माणस्थलको रुखका जरा उखेल्ने कार्य प्रभावित बनेको बताउनुभयो । उहाँले गत शनिबार वन कार्यालयले जरा उखेल्न आदेश दिएको बताउनुभयो ।
“राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले वन कार्यालयले यसलाई रोक्ने कुरै आउँदैन ।” उहाँले भन्नुभयो, “वनका केही प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ हुन पुगेको हो ।” निर्माण कम्पनीले भने सरकारी पक्षको ढिलाइका कारण आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेको छ । “जनशक्ति र सवारीसाधन त्यसै लामो समय धन्क्याएर राख्नु प¥यो ।” कालिका–कुमार जेभीका कार्यक्रम प्रबन्धक पौडेले भन्नुभयो, “अब निर्माणमा सबै प्रक्रिया सरलताका साथ सहजीकरण होस् ।”
कैलालीको २० हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । “लम्की शाखा नहर नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण हँुदैछ ।” रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका इञ्जिनीयर विष्टले भन्नुभयो, “पथरीयादेखि थप १८ किलोमिटर शाखा निर्माणका लागि सर्वेको काम हुँदैछ ।”
आयोजनाअन्तर्गत ४.७ मेगावाटको जलविद्युत्, नहर आधुनिकीकरण, कृषिसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । आयोजनाका अनुसार नहर आधुनिकीकरणका लागि विश्व बैंकले झण्डै रु छ अर्ब लगानी गर्दैछ भने आयोजनाअन्तर्गत नयाँ शाखा निर्माणमा सरकारको लगानी भइरहेको छ ।
हाल रु १२ अर्ब ६३ करोड लगानी रहेको आयोजनाअन्तर्गत कर्णालीको चिसापानीमा इन्टेक (मुहान) निर्माण सम्पन्न भई करीब ५.८ किलोमिटर मूल नहर निर्माणसमेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । आयोजनाका इञ्जिनीयर विष्टले आगामी वर्षभित्र ८.८ किलोमिटर मूल नहर र जलविद्युत् निर्माणको काम सकिने बताउनुभयो । “आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणतर्फ ३६ प्रतिशत काम सकिएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “शाखा नहर निर्माणको गति पनि बढ्दैछ ।” आयोजनाअन्तर्गत रानी, जमरा र कुलरिया गरी तीन शाखा नहर विस्तार यसअघि नै भइसकेका छन् ।
सिञ्चित क्षेत्रको बचावटका लागि कर्णाली, पथरैया र मोहना नदीमा तटबन्ध गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म २१ किलोमिटर लामो भागमा तटबन्धको काम भएको छ । आयोजनाको निर्माणपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका टीकापुर नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकासहित पथरैया, दुर्गौली, जानकीनगर, प्रतापपुर, धनसिंपुर, नारायणपुर, मुनुवालगायत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
३१ असार २०७६, मंगलवार ००:३८ 0
३० असार २०७६, सोमबार १९:११ 0
३० असार २०७६, सोमबार १६:२१ 0
११ माघ २०७४, बिहीबार १०:४७ 0
मेरो दिमागमा यौनको कुरा मात्र खेलिरहन्छ किन होला ?
१८ माघ २०७४, बिहीबार ०८:५४ 0
यस्ता छन् पेट दुख्ने समस्या तथा समाधानका उपायहरु
२ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०९:५३ 0
सन्निले नराम्रो नजरबाट यसरी जोगाईन् किसानको बाली
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार १०:४१ 0
यसरी सुरु भएको थियो विश्व एड्स दिवस